नारामा सिमित बालदिवस – Quick Khabar
नारामा सिमित बालदिवस
२०७७ भाद्र २९, सोमबार १२:२७ मा प्रकाशित
आज राष्ट्रिय बाल दिवस । ‘विपदमा बालअधिकारको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । बाल दिवसलाई केवल नारामा मात्र सिमितता गरियो भने बालबालिकाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नै पाउँदैनन् । किनकी नेपालमा बालअधिकार हनन्को निकै डरलाग्दो अवस्थामा छ । केवल नारा लगाउँदैमा र वर्षमा एक दिन दिवस मनाउँदैमा बालबालिकाहरुको अधिकारको सुनिश्चितता हुँदैन । त्यसका लागि उनीहरुले प्राप्त गर्ने शिक्षादेखि उनीहरुको मानसिक तथा बौद्धिक विकास समेतलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।
शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकालाई मात्र हेरेर बालबालिकाले अधिकार पाएका छन् भन्नु व्यर्थ छ । नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश र भौगोलिक रुपमा विकट छ । आर्थिक रुपमा विपन्न, शैक्षिक रुपमा पछाडि परेको र भौतिक विकासमा समेत आत्मनिर्भर बन्न नसकेको प्रदेशमा रहेका बालबालिकाहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर धेरै व्याख्या र विश्लेषण गरिहनु पर्दैन ।
आफ्नो पेट पाल्नकै लागि होटल तथा अन्य व्यावसायहरुमा ज्याला मजदुरी गर्ने बालबालिकाको दैनिकीमा परिवर्तन कहिले आउने ? गास, बास, कपासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यकीय आवश्यकतामा ढुक्क भएर बालबालिका बाँच्न पाउने कहिले ? आजका बालबालिका भनेका भोलिका देशका कर्णधार हुन् । उनीहरुलाई काँचो माटो भनिन्छ । वर्तमान अवस्थामा कोरोना महामारीका कारण शिक्षाबाट समेत बञ्चित भएका बालबालिकाहरुको भविष्यका बारेमा सरोकारवालाहरुले सोच्नु जरुरी छ । नारामा होइन व्यवहारमा बालअधिकारको सुनिश्चितता गरौं ।